အနုပညာစလုပ်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရ ပုံလေးတွေ ပရိသတ်တွေကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဇေရဲထက် | CeleTrend
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ အားလုံးရဲ့အသိအမှတ်ပြုချစ်ခင်အားပေးခြင်းခံနေရတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲအသည်းကျော်ဇေရဲထက်ကို ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားပါနော်။ သူဟာ အချစ် အမုန်း အလွမ်း ဘယ်လိုဇာတ်ရုပ်ပဲလာလာပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ လူငယ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားအများအပြားကို ရိုက်ကူးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ လက်ရှိမှာလည်း ကြော်ငြာတွေ ဖျော်ဖြေရေးတွေနဲ့ မအားမလပ်ရအောင် ရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုပီပြင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတော့ ယောက်ျားပီသတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တည်ကြည်တဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူးနော်။
သူရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်သွယ်မပြတ်ရအောင် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်ပေါ်တွင်ဖော်ပြပေးလေ့ရှိတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။လတ်တလောမှာလည်း အရင်အနုပညာစလုပ်ခဲ့စဉ်က အမှတ်တရပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားကာ ပရိသတ်ကြီး ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ခဈြပရိသတျကွီးရေ…. အနုပညာလောကမှာ အားလုံးရဲ့အသိအမှတျပွုခဈြခငျအားပေးခွငျးခံနရေတဲ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှရေဲအသညျးကြျောဇရေဲထကျကို ပရိသတျကွီးလညျးသိပွီးသားပါနျော။ သူဟာ အခဈြ အမုနျး အလှမျး ဘယျလိုဇာတျရုပျပဲလာလာပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ လူငယျ အနုပညာရှငျတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှနေဲ့ဗီဒီယိုဇာတျကားအမြားအပွားကို ရိုကျကူးအောငျမွငျခဲ့တဲ့မငျးသားတဈယောကျလညျးဖွဈပွီးတော့ လကျရှိမှာလညျး ကွျောငွာတှေ ဖြျောဖွရေေးတှနေဲ့ မအားမလပျရအောငျ ရိုကျကူးနရေတာလညျးဖွဈပါတယျ။ကရြာဇာတျရုပျကိုပီပွငျအောငျသရုပျဆောငျနိုငျပွီးတော့ ယောကျြားပီသတဲ့ ခန်ဓာကိုယျနဲ့တညျကွညျတဲ့ မကျြနှာပိုငျရှငျလညျးဖွဈတဲ့အတှကျ မိနျးကလေးပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးကြျောလေးဆိုလညျး မမှားပါဘူးနျော။
သူရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုပုံရိပျလေးတှကေို ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျသှယျမပွတျရအောငျ ဖဘှေ့တျစာမကျြပျေါတှငျဖျောပွပေးလရှေိ့တာလညျးတှရေ့ပါတယျ။လတျတလောမှာလညျး အရငျအနုပညာစလုပျခဲ့စဉျက အမှတျတရပုံလေးတှကေို ဖျောပွထားကာ ပရိသတျကွီး ကွညျ့ရှုနိုငျစရေနျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။